Dihy fandokoana pejy mahafinaritra - pejy fandokoana maimaim-poana
Mila fitaomam-panahy tsy tapaka ny ankizy. Ny pejy fandokoana sy ny boky fandokoana dia mandray anjara betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fahaiza-mamorona ny zanantsika faralahy. Tsy misy fitsipiky ny ankihibe raha toa ka efa antitra ny zaza vao afaka manomboka mandoko na rehefa tokony hanomboka tokoa izy ireo. Satria ny voka-dratsin'ny sary hoso-doko dia matetika ny ankizy dia afaka mamela ny eritreriny hirenireny sy hahita fiadanam-po ao anatin'ny tontolo andro feno fientanam-po. Na izany aza, zava-dehibe foana ny pejy fandokoana atolotra dia natao ho an'ny ankizy. Satria ny sary fandokoana mifanaraka amin'ny taonany ihany sy ny motif mety dia manaitra ny fahavononan'ny ankizy hiditra amin'ny fandokoana. Ary eo indrindra no nidiran'ny fanoloranay ho an'ny pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy.